AMISOM oo ka hadashay waxqabad
10 Jan 10, 2013 - 10:40:49 AM
Afhayeenka Ciidmada AMISOM oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadooda oo tiradoodu gaarayso 17,000 oo askari ay guulo ka gaareen dagaaladii ay la galeen Al-shabaab, ayna haatan ku sugan yihiin deegaano ka fog Muqdisho.
Col. Cali Aadan Xumad ayaa wareiyayaasha u sheegay inay sii wadi doonaan howlgalada ay kula dagaalamayaan Al-shabaab inta ay dalka oo dhan ka saarayaan, wuxuuna xusay in howlgallkooda uu isku bedelay mid nabad dhalin ah.
“Howlgaladii aan ka wadnay Somaila waxay u muuqdaan kuwo Najaxay, waayo waxaanu gaarnay deegaano ka baxsan Muqdisho, sida Balaweyne, Kismaayo, Jowhar, Baydhabo iyo Marko” ayuu yiri afhayeenka AMISOM. Sidoo kale, afhayeenku wuxuu sheegay in deegaanadii ay Al-shabaab kala wareegeen ay amaan yihiin xiligan ayna wadaan qorshayaal kale oo ay ku adkeynayaan ammaanka si aysan kooxda Al-shabaab dhibaatooyin uga abuurin.
Ciidmada AMISOM oo ka socda dalalka, Djibouti, Uganda, Burundi iyo Kenya ayaa waxay sanadkii lasoo dhaafay Al-shabaab ka qabsadeen deegaano fara badan oo ay ka talin jireen, waxaana deegaanadaas ka mid Magaalada Kismaayo oo Al-shabaab ay awood badan ku lahayd.
“Waxaan doonaynaa inaan sii xoojino Howlgalkeena maadaama sanadkii hore  aan guulo muuqda gaarnay, shacabkana waxaan ka dalbanaynaa inay nala shaqeeyaan” ayuu yiri Col. Xumad.
Howlgalka AMISOM oo galay sanadkii 7-aad ayaa waxaa sanadkii hore ee 2012 uu ahaa sanadkii ay gaareen guulihii ugu waaweynaa, iyagoo Al-shabaab ku qasbay inay ka baxdo Muqdisho oo ay awood badan ku lahayd.